Siyaqhubeka "nokukhululwa": Ii-AirPods 3 zifika | Ndisuka mac
Siyaqhubeka "nokukhululwa": Ii-AirPods 3 ziyafika
Emva kokubhengeza Tim Cook kunye neqela lakhe uluhlu olutsha lwemibala ye-HomePod mini, kuza umboniso wesibini emva kwemini kumsitho "ongafakwanga": isizukulwana sesithathu see-AirPods.
Emva kwamarhe amaninzi kunye nokulibaziseka, iApple ekugqibeleni isungule okulindelweyo 3 AirPods. Ngokomgaqo, ngaphandle kwento entsha ebonakalayo ngokubhekisele kuwo onke amanqaku awayesele evuziwe. Makhe sibone ukuba sisiphi isizukulwana sesithathu see-headphone ezingenazingcingo zika-Apple.
Okokugqibela uApple usibonise nje imizuzu embalwa edlulileyo isizukulwana sesithathu sodumo lwayo IiPodPods. Umboniso owawucwangciselwe inqaku eliphambili likaSeptemba, kodwa ekugqibeleni walibaziseka ukuza kuthi ga namhlanje ngenxa yeengxaki zokuvelisa.
Zininzi iindawo ezivuzayo ebezikho kwii-AirPods 3, kwaye inyani kukuba zonke ziphumelele. Ngoku ekubeni ekugqibeleni sinazo izinto ezisemthethweni, masibone ukuba yeyiphi Isizukulwana sesithathu Ii-headphone ezingenazingcingo zika-Apple: ii-AirPods 3.
Uyilo lwangaphandle lufana nolo besele silwazi ngokuvuza okuthile. Uyilo loyilo lwee-AirPod zangaphambili, ngaphandle kwamabhanti erabha anayo i-AirPods Pro. I-AirPods Pro.
Ibandakanya Indawo yomsindo IDolby Atmos, kwaye enkosi kulwakhiwo lwayo olutsha, ii-bass ziye zaphuculwa kwisandi sokugqibela. Ngoku bayaxhathisa emanzini, njengoko kunjalo nge-AirPods Pro.
Ikwabandakanya inkqubo yokulinganisa ngokuchanekileyo. Kuxhomekeka kwizinto ezininzi zangaphandle, isandi silinganiswa ngokuzenzekelayo.
Ukuzimela kwe-AirPods 3 entsha kuphuculwe xa kuthelekiswa nale ikhoyo ngoku: I-6h yokumamela ngaphandle kokuphazanyiswa, kunye neeyure ezingama-30 ezipheleleyo zokumamela ziphinda zihlaziye kunye nebhetri yecala. Umkhono otshilo ngoku une Ukushaja ngaphandle kwamacingo ngokukhawuleza, okukuvumela ukuba ubize ukudlala iyure yomculo enemizuzu emi-5 kuphela yentlawulo.
Njengoko besisele sazi ukuba kukho amarhe avuzayo, kuyaqinisekiswa ukungabikho kokurhoxiswa kwengxolo. Lo msebenzi ugcinelwe i-AirPods Pro kunye ne-AirPods Max. Ixabiso le-AirPods 3 entsha likwindawo ethile phakathi kwee-AirPods kunye ne-AirPods Pro: 199 iiYurophu. Banokuyalelwa namhlanje, ukuba bazise kwiveki ezayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Siyaqhubeka "nokukhululwa": Ii-AirPods 3 ziyafika
I-14-intshi entsha kunye ne-16 intshi iMacBook Pros yaziswa
I-M1 Pro kunye neM1 Max chips yeApple Macs